Port, Harbour & Waterway Dredging Project Case Study - I-Ellicott Dredges
Iziphathimandla Zibona Ukudilizwa Kwe-Utica Harbour njenge-Milestone of Revitalization
Umthombo: Ukudonswa Namuhla Ngu-DAN MINER UTICA, NY (WKTV) - Eminyakeni emibili, uzoqala ukubona izindawo zokudlela, izitolo zokuthengisa futhi mhlawumbe nehhotela liqhamuke e-Utica Harbour. Ukwehliswa kabusha kwetheku kwaqala ngoSepthemba futhi kwakufanele kuqhubeke kuze kube unyaka omusha. Kodwa-ke, iDolobha lase-Utica kanye nezikhulu zombuso bathole isipho sikaKhisimusi sokuqala ngoLwesine. "Bakwenza ngesikhathi sokurekhoda, bakithi," kusho uCarmella Mantello, uMqondisi weCanal Corporation. “Besilinganisele cishe izinyanga ezine ukuzincisha. Bakwenze kungakapheli izinyanga ezimbili. ” "Akuzange kuthathe inkontileka yangasese," kusho u-Assemblywoman ...
ICape Iqedela Isigaba sokuqala Southeast Canal Dredging
ICape Coral, eFlorida Umthombo: ICape Coral Daily Breeze Idolobha kanye nefemu yokudonsa sebeqedile isigaba sokuqala sohlelo oluyinhloko lokumba abaphathi kulo lonke uhlelo lwemisele yedolobha. UMichael Ilczyszyn, umphathi webhizinisi ledolobha, noJack Adams waseGator Dredging benze isethulo eMkhandlwini Wedolobha ngesikhathi somhlangano waso ngoMsombuluko eCity Hall ngohlelo lwayo lokubamba i-quadrant eseNingizimu mpumalanga. Isethulo sonke, wonke amakhasi ayi-179, angabonakala ku-inthanethi. U-Adams no-Ilczyszyn banikeze umkhandlu amaphuzu avelele. I-quadrant eseningizimu-mpumalanga, enemisele engu-349 eqanjwe ngamamayela ayi-115, iseningizimu yeHancock Bridge Parkway nasempumalanga ye ...
Izakhamizi zibona ukuthi i-Dredge (Ellicott® 370) isebenza kanjani
UMOSES LAKE - Cishe izakhamizi ezingama-50 zaseMoses Lake nezicukuthwane bakhuphuke ngomqansa ukuze babone inzika edonswa phansi echibini iye echibini elibambayo. Ipayipi elikhulu lisuka echibini liye echibini, lilahla amanzi. Umbala wamanzi ushintshe kusuka kokucacile kuya kokumnyama, abanye ababukeli baqala ukuthatha izithombe ukubhala ukuthi ubuchwepheshe busebenza kanjani. Ukudonsa kabusha, kusetshenziswa i-Ellicott Dragon Dredge 370, kuqale ngokusemthethweni ngoJulayi 1, 2011 okokuqala eMoses Lake ukwenza ngcono ikhwalithi yamanzi. Isifunda saseMoses Lake Irrigation and Rehabilitation District simeme umphakathi kulo mbukiso ngoMsombuluko ukuze ufunde kabanzi ngalo msebenzi. UMariya ...
I-Dredge: I-SAS TRAPNELL, iDelaware City Canal, e-USA
Umthombo: I-Ellicott® International Ngo-Ephreli 1984, i-SAS Trapnell, i-Ellicott® Brand Series 370 dredge, yethulwa eNoxontown Pond eduze naseMiddletown. Manje ngonyaka wawo weshumi nantathu wenkonzo, lo dredge uhlinzeke ngezindlela zokubuyisa nokuhlinzekela ukugcinwa kwamachibi nakwezinye izidumbu zamanzi kuzo zombili izifunda zaseNew New naseKent. Nyakenye bekuyinto ebimatasatasa kakhulu kwaSAS Trapnell nabasebenza kuyo. Iphrojekthi eseMoores Lake iphothulwe ngemuva kokukhishwa echibini elingaphezulu kuka-75,000. Ukudilizwa kwenziwa ngendlela ethinta izidingo ze ...
E-USA: I-Piedroba Marine Construction (PMC) Iqedela Ukudonswa Kwezinkantolo eManatee Pocket
Usonkontileka odonsela phansi waseFlorida nosonkontileka wasolwandle iPiedroba Marine Construction (PMC) umemezele namuhla ukuphothulwa ngempumelelo kwengxenye yayo yephrojekthi yeManatee Pocket Dredging Project. I-PMC yaqashwa nguDickerson waseFlorida ngasekuqaleni konyaka ukuba abambe izizumbulu eziningana ezazizungeze isiteshi esikhulu. I-PMC's 2009 8 ″ Ellicott® brand swinging ladder dredge yasetshenziselwa ukwehlisa imisele emincane njengamamitha angama-20 ububanzi. Okubunjiwe kudluliswe ngeziteshi ezimbili ze-booster ngaphezu kwebanga eliphakeme lamamitha ayi-14,000. Isikhulu esiphezulu se-PMC nothishanhloko, uDkt. Prieto-Portar ujabule kakhulu ngokuqedwa komsebenzi ngempumelelo futhi uncome ukusebenzisana kwamaqembu womabili la maqembu: “It ...
Umthombo: Ukudonswa Namuhla kwe-US Army Corps of Engineers, esifundeni saseNew York, usonkontileka uqale isigaba sesibili sokulungiswa kokutholwa kokufinyeleleka eMoriches Bay esiteshini sikahulumeni saseLong Island Intracoastal Waterway kuleli sonto. UPaul Howard Construction, waseGreensboro, NC, unikezwe inkontileka eyizigidi ezingama- $ 1.45 yokwenza umsebenzi wokulungisa indawo endaweni yaseMetrhes Bay esiteshini ekujuleni okugunyaziwe kwezinyawo ze-6. Ukuze kubhekwane nezinsizakusebenza zasolwandle ezizwelayo, le phrojekthi yehlukaniswe izigaba ezimbili ngokugqugquzelwa okubili okuhlukene. Isigaba sokuqala, ebesigxile ezindaweni ezingasesigabeni saseMoriches Bay ngokudonsa kanzima kakhulu, saphothulwa phambilini ...
ISt Sebastian (Florida) Muck Dredging Ngaphansi Kokusebenzisa i-Ellicott® Brand Series 970
Umthombo: Ed Bierschenk / TCPalm.com SEBASTIAN, eFlorida - Ngesikhathi amagagasi eshaywa ihlombe phezu kukaGeorge Koraly njengoba umsebenzi wakhe wamashumi eminyaka wokususa udoti eMfuleni iSt. Sebastian ufezekisile ngoLwesithathu, wazama ukudlulisela ukunaka kwabanye yena bakholelwa ukuthi bekufanele ukuqashelwa. UCrewman wakwa-SubAqueous Services, Inc. wase-Orlando ulungiselela ukuqoshwa eC-54 Canal emugqeni wase-Indian River-Brevard County enyakatho yeSebastian ukulungiselela iphrojekthi yokwakha kabusha ukususa cishe ama-1.8 million cu yds of muck eminyakeni eminingana elandelayo. kusuka eMfuleni iSt. Sebastian e-Indian River County. (Ubukhosi ...
Inkontileka Yezimpawu Zamazwe Ngamazwe e-Ellicott ® eVietnam Ye-2 Dredger. Ama-Firms ase-US Kuzodingeka Alwele Izinkontileka EVietnam
4 Disemba 2000 Umthombo: ENR kaSherie Winston Yize amafemu amabili aseMelika asayina izinkontileka ngesikhathi sohambo lukaMongameli uClinton oluya eVietnam ngoNovemba 17-20, amasango ezikhukhula akulindelekile ukuthi avulele amafemu amasha ase-US. Izinkampani esezivele zenze ibhizinisi kungenzeka kube khona ezinomlenze ophakeme. "Ukuze uphumelele eVietnam udinga ukubekezela okuningi, ukwesekwa okusebenzayo okuvela kuhulumeni wakho, omele iVietnam oziqonda zombili izindlela zasentshonalanga nezasendaweni zokwenza ibhizinisi kanye nenhlanhla," kusho uMmeli we-Ellicott® International. I-Ellicott® International yakhele futhi yakha ama-dredges ngaphezulu kweminyaka eyi-100 futhi ...
UKUMISELA NENKINGA ENKULU YOKUTHUTHA Ihholo Inkontileka iqeda ukwakha phansi itheku elisha eliseduze neGreat Barrier Reef yase-Australia
Umthombo: I-World Dredging Mining & Construction usonkontileka wokudonswa e-Australia, iHall Contracting Pty Ltd usanda kuqeda ukwakha kabusha eMackay Small Craft Harbor ogwini oluphakathi neQueensland. Itheku elisha, elizogcina linemikhumbi yezivakashi engu-590 ethwala imikhumbi yezivakashi esebenzela iGreat Barrier Reef, lakhiwe eduze kwedolobha elikhona lamanzi ajulile okusanhlamvu noshukela eMackay. Ukwakhiwa kwendawo entsha ethekwini kufaka phakathi: Ukwakhiwa kwamanzi okuphuka azinzile ngamandla angama-1,300, enziwa yiJohn Holland Construction. Ukudonswa kabusha kwe-600,000 m3 yesihlabathi esiminyene esiphakathi kuya ekujuleni kwe-RL-4.5 m Lowest Astronomical Tide, ...